Madaxweyne Erdogan wuxuu Inqilaabki u arka Hadyad Xagga Alla uga timid – Xeernews24
Madaxweyne Erdogan wuxuu Inqilaabki u arka Hadyad Xagga Alla uga timid
Erdogan: ” Isku daygani wuxu ahaa Hadiyad xagga Ilaahay nooga timi Virus-kana dalka waan ka sifaynaynaa” Waxa la qabtay….
” Isku daygani wuxu ahaa Hadiyad xagga Ilaahay nooga timi Virus-kana dalka waan ka sifaynaynaa”
Waxa la qabtay ilaa hadda 6000 (lix kun) oo ay ku jiraan Taliyihii Saldhiga cirka ee mareykankana u ahaa bayska uu kaga duulo Daacish taliyahaas oo magaciisu yahay Bekir Ercan Van iyo Taliyihii dhinaca arimaha milatariga ee Madaxweyne Erdogan, mr Cali.
Waxa la xidhay saldhigii ama bayskii uu mareykanku ku lahaa Turkiga. Erdogan ayaa codsaday in loosoo gacan galiyo wadaad ay xulufo ahaan jireen markii hore oo hadda mucaarad ku ah oo degan dalkaasi maraykanka mr Fathullah Gul, kaas oo uu ku sheegay maskaxdii soo maleegtay isku daygii dhicisoobay. Haseyeeshee mareykanku wuxu yiri “keena caddayn”
Waxa wali xidhan meheradaha iyo meelihii shaqada shicibkuna waxay ku jiraan dabaal deg. Waxa dib loo furay madaarka Incirlik oo dhanka koonfureed ku yaal.
Dawaladu waxay si buuxda gacanteeda ugu soo noqday maamulkii iyo kala dambeyntii dalka, balse waxa wali jira kooxo ka mid ah kuwii afgambiga dhigay oo ku sugan Istanbul oo xukuumadu ku sheegtay kuwo aan khatar ku haynin.
Waxa kale oo jira xubno muhiim ah oo ku lug lahaa inqilaabka oo lagu raadjoogo.
Madaxweyne Tayip Erdogan oo maanta ka hadlay dhacdadan mar uu ka qeybgalay aaska dadkii lagu laayay rabshadihii ayaa yiri ” Isku daygani wuxu ahaa Hadiyad xagga Ilaahay nooga timi Virus-kana dalka waan ka sifaynaynaa”dhamaan xafiisyada dawladana waan ka nadiifinaynaa.
Dhanka kale R/wasaraha Turkiga Yildirim oo xalay TV-ga ka hadlay ayaa sheegay in aan wali fari ka qodnayn hawl-galkooda.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/07/Famali-Ordogan.jpg 167 302 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-07-17 21:50:322016-07-17 21:50:37Madaxweyne Erdogan wuxuu Inqilaabki u arka Hadyad Xagga Alla uga timid
Midow Afrika oo eedeeyn kulul u jeediyeey Maxkamadda caalamiga ah ee ICC Injineer Mahad Abiib Norwey waxay naga dhigtay (Secon Class Citizens)